အသင်းတော်-ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်ကို အပြည့်အဝဖော်ပြရန် တရားစီရင်ရေးတမန်တစ်ဦး လိုအပ်သည်။
အသင်းတော်အား အပြည့်အဝဖော်ပြရန် တရားစီရင်ရေးတမန်တစ်ဦး လိုအပ်သည်။
ေမ ၂၀၊​ ၂၀၂၂ မတ္ 20 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
“နောက်ဆုံးဘေးဒဏ်ခုနစ်ချက်ပြည့်သော ဖန်ပုလင်းခုနစ်လုံးကိုပါရှိသော ကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါးတွင် တစ်ပါးသည် ငါ့ထံသို့လာ၍ ငါ့ထံသို့လာ၍ လာပါလော့၊ ဤအရပ်၌ သိုးသငယ်၏မယား သတို့သမီးကို ငါပြမည်ဟု ဆို၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၉
အသင်းတော်အစစ်ကို လူတိုင်းမဖော်ပြနိုင်ပါ။ လိမ်ညာခြင်းဆန့်ကျင်ဘက် လျှို့ဝှက်ခြင်း၏ ရှုပ်ထွေးမှုကို ဖယ်ရှားရန် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ဖန်ပုလင်းများကို သွန်းလောင်းရန် ဘုရားသခင်က ဘိသိက်ပေး၍ ရွေးချယ်ထားသော ကောင်းကင်တမန် ဓမ္မဆရာကို ယူသည်။ ၎င်းပြင် သင်သည် ဤအရာကို သင့်စိတ်နှလုံးနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အား ထုတ်ဖော်နိုင်စေရန် ဘုရားသခင်ကို စစ်မှန်သောဝတ်ပြုရေး၏ ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သယ်ဆောင်သွားခြင်းဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
“ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်ကို မြင့်သောတောင်သို့ဆောင်သွား၍၊ ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သော သန့်ရှင်းသောယေရုရှလင်မြို့ကြီးကို ပြတော်မူ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၀၊
ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်မှလွဲ၍ အခြားအရာများမှတဆင့် အသင်းတော်အား ကြည့်ရှုရန် ကြိုးစားနေကြသည် — သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ထံမှ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအစား ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည်-
လူတို့ မှတ်တမ်းတင်ထားသော သမိုင်းကို အခြေခံ၍ လူသား၏ ထင်မြင်ယူဆချက် အမြင်များဖြင့် မှေးမှိန်သွားသော သမိုင်းမှတ်တမ်းနည်းလမ်း။
၎င်းတို့၏ “မိမိကိုယ်မိမိ ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း” နှင့် “မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်း” အယူဝါဒ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှု။ (တကယ်တော့ ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းအများစုနဲ့ “ဘုရားသခင့်အသင်းတော်အုပ်စုများ” ပေါ်ပေါက်လာပုံဖြစ်တဲ့ “ဘုရားကျောင်းအမှတ်အသားကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း” အစီအစဉ်။)
ကက်သလစ်နှင့် အော်သိုဒေါ့စ်ချာ့ခ်ျများသည် ရိုးရာအခြေခံဝိသေသလက္ခဏာအပြင် ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန် လွန်စွာအသုံးပြုသည့် “လူသားမျိုးနွယ်” အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် သေးငယ်သောအသင်းတော်များစွာအားကိုးသည့် “လူ့မိသားစုမျိုးရိုး” အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်သည်။
မည်သူမဆို ကျွန်ုပ်တို့ကို “အံ့ဩစရာ” ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား “အံ့ဖွယ်အမှုများ” ပြုလုပ်နိုင်သည့် “နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့် အံ့ဩဖွယ်ရာများ” အစီအမံ- အံ့ဖွယ်အမှုများ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ စိတ်ခံစားမှုများ၊ ချောမွေ့သောစကားပြောဆိုမှု သို့မဟုတ် နောက်လိုက်အများအပြား။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သွန်သင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်နေမည်ဆိုလျှင် အရေးမကြီးပါ။ ဤသည်မှာ အံ့ဘွယ်သောအားဖြင့် လှည့်စားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ချာ့ခ်ျသည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် “ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှု၏အသင်းတော်” အစီအစဉ်သည် ခေတ်မီလေလေ (“ဘုရားသခင်” သည် ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်သမျှဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်မှုမှာ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။) ၎င်းသည် “ကျွန်ုပ်နှင့်ပတ်သက်သည် သို့မဟုတ် မည်သည့်အရာနှင့်မျှ မသက်ဆိုင်ပါ။ ငါလိုချင်တယ်။"
သို့သော် ဤနေရာ၌ ဗျာဒိတ် ၂၁:၉-၁၀ တွင် ဘုရား၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဘိသိက်ပေးသော ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာတစ်ဦးကို ယူ၍ စစ်မှန်သောအသင်းတော်နှင့် သူမ၌ရှိနေကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသထားသည်။
“နောက်ဆုံးဘေးဒဏ် ခုနစ်ချက်ပြည့်သော ဖန်ပုလင်းခုနစ်လုံးပါသော ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါးတွင် တစ်ပါးသည် ငါ့ထံသို့လာ၍ ငါ့ထံသို့လာ၍ လာပါလော့၊ ဤအရပ်၌ သိုးသငယ်၏မယား သတို့သမီးကို ငါပြမည်ဟု ဆို၏။ ပြင်းစွာမြင့်သောတောင်သို့ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါ့ကိုဆောင်သွား၍၊ သန့်ရှင်းသောယေရုရှလင်မြို့ကြီးသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်ကို ပြတော်မူ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၉-၁၀၊
ထိုကြီးမားပြီး မြင့်မားသောတောင်သည် ယနေ့ခေတ်အသင်းတော်များတည်ရှိနေသည့် အပြစ်တွင်းတွင်းထက် မြင့်မြတ်သောနေထိုင်သည့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ဇိအုန်တောင်ဖြစ်ပြီး ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ကျန်ကြွင်းသော ယေရုရှလင်မြို့မှ လွတ်သောသူတို့သည် ထွက်လာကြလိမ့်မည်။ ဇိအုန်တောင်၊ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၏ စိတ်အားထက်သန်သောစိတ်သည် ဤသို့ပြုလိမ့်မည်။” ~ ၂ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၉:၃၁
“ထာဝရဘုရားသည် ကြီးမြတ်တော်မူ၍ ငါတို့ဘုရားသခင်၏မြို့၊ သန့်ရှင်းတော်မူသော တောင်၊. အခြေ အနေအရ လှပသော၊ မြေကြီးတပြင်လုံး၏ ရွှင်လန်းမှုသည်၊ ဇိအုန်တောင်၊မြောက်ဘက်အခြမ်းတွင် ဘုရင်ကြီး၏မြို့၊ ခိုလှုံရာအတွက် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဘုံဗိမာန်များတွင် လူသိများသည်။" ~ ဆာလံ ၄၈:၁-၃
“သခင်ဘုရားကို ကိုးစားသော သူတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဇိအုန်တောင်၊ဖယ်ရှား၍မရနိုင်သော်လည်း ထာဝရတည်၏။” ~ ဆာလံ ၁၂၅:၁
“ငါသည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို သင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။ ငါ၏သန့်ရှင်းသော ဇိအုန်တောင်၊သို့ပြုလျှင် ယေရုရှလင်မြို့သည် သန့်ရှင်း၍၊ တပါးအမျိုးသား တယောက်မျှ မရှောက်သွားရ။ ~ ယောလ ၃:၁၇
“ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါသည် ဇိအုန်မြို့သို့ပြန်လာ၍၊ ယေရုရှလင်မြို့အလယ်၌ နေလိမ့်မည်။ သစ္စာမြို့၊ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၏ တောင်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောတောင်၊” ~ ဇာခရိ ၈:၃
သခင်ယေရှုသည် လူတို့၌ အမှန်တကယ်ရှိသောအရာကို သိသောကြောင့်၊
“သို့သော်လည်း၊ ယေရှုသည် လူအပေါင်းတို့ကို သိသောကြောင့်၊ သူတို့၌ ကိုယ်ကိုကိုယ်အပ်တော်မမူ။ လူ၌ရှိသောအရာကို သိတော်မူ၏။” ~ ယောဟန် ၂:၂၄-၂၅
“မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤတံဆိပ်ပါလျက်၊ ထာဝရဘုရားသည် မိမိဖြစ်သောသူတို့ကို သိတော်မူ၏။. ခရစ်တော်၏ နာမတော်ကို သမုတ်သော သူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ။” ~ ၂ တိမောသေ ၂:၁၉
“ထိုကြောင့်၊ သူတို့၏အသီးအနှံအားဖြင့် သိကြလိမ့်မည်။ သခင်၊ သခင်၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရမည်ဟု ငါ့အားပြောသောသူတိုင်း မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်၏အလိုကို ဆောင်သောသူမူကား၊ သခင်၊ သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် နာမတော်ကို အမှီပြု၍ ပရောဖက်ပြုကြသည်မဟုတ်လော၊ ကိုယ်တော်၏နာမကိုအမှီပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်တော်မူပြီလော။ နာမတော်ကိုအမှီပြု၍ အံ့ဩဘွယ်သောအမှုများစွာကို ပြုတော်မူသလော။ ထိုအခါ ငါသည် သူတို့အား ဝန်ခံ၍၊ ဒုစရိုက်ကိုပြုသော သူတို့၊ ငါ့ထံမှ ထွက်သွားကြလော့။” ~ မဿဲ ၇:၂၀-၂၃
စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မှုတ်သွင်းမှုဖြင့် သင်သည် သယ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်- သင်၏စိတ်နှလုံးနှင့် အသက်ကို သန့်ရှင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သင့်အတွင်းသန့်ရှင်းမှုကိုပြသသော ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါသလား။
“ထို့နောက် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အကျွန်ုပ်ကို ကြီးစွာသောမြင့်သောတောင်သို့ ဆောင်သွား၍၊ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်သော ယေရုရှလင်မြို့ကြီး၊ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ဆင်းသက်သော ထိုမြို့ကြီးကို ပြတော်မူ၏။ သလင်းကျောက်ကဲ့သို့ ကြည်လင်သော ပန်းမြတ်ကျောက်ကဲ့သို့ပင်။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၀-၁၁
ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆင်းသက်လာသော သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ကြွလာခဲ့သည်။ ဤကျမ်းချက်သည် စစ်မှန်သောသစ္စာရှိအသင်းတော်သည် ဘယ်ကလာသနည်း၊ သူ့ကိုယ်သူ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသန့်ရှင်းစေသော ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေးနေပါသည်။ သူမ၏အစစ်အမှန်သဘာဝသည် ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သူမတွင် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ရှိသည်။
စစ်မှန်သောချာ့ခ်ျသည် လူတို့ပြုလုပ်သော ချာ့ခ်ျဖန်တီးမှုများနှင့် မဆင်မခြင်ဖြစ်သည်- ကက်သလစ်နှင့် ကျဆုံးသောပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်များ။ သို့သော်၊ ယင်းအစား၊ သမိုင်းတစ်လျှောက် ယေရှုခရစ်ကို နာခံပြီး လိုက်လျှောက်ရန် သစ္စာစောင့်သိကြသော စစ်မှန်သောကြိုးစားသူ အနည်းငယ်မျှကိုသာ ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
Jasper stone သည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဂျစ်ပါကျောက်သည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုဖော်ပြရန် အခန်းကြီးလေးတွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်အသုံးပြုသည့်အရာဖြစ်သည်။
“ထိုခဏခြင်းတွင် ငါသည် စိတ်ဝိညာဉ်၌ရှိ၍၊ ကြည့်ရှုလော့၊ ကောင်းကင်၌ ပလ္လင်တစ်ခုတည်၍၊ ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေ၏။ ထိုင်သောသူသည် မြတ်စွာဘုရားနှင့်တူသော ငါးသေတ္တာကျောက်ကဲ့သို့ ဖြစ်၍၊ ပလ္လင်တော်ပတ်လည်၌ မြနှင့်တူသော သက်တံ့ရှိသည်” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၄:၂-၃
ထို့ကြောင့် ဤအသင်းတော်-ဝိညာဉ်ရေးမြို့တော်အကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောရလျှင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ဤသို့ဆိုသည်–
“ကြီး၍မြင့်သောမြို့ရိုးရှိ၍ တံခါးတဆယ်နှစ်ပေါက်၊ တံခါးဝ၌ ကောင်းကင်တမန်တကျိပ်နှစ်ပါးရှိ၍၊ ဣသရေလအမျိုးသား တဆယ့်နှစ်နွယ်တို့၏အမည်ဟူမူကား၊” ဗျာဒိတ် ၂၁း၁၂၊
တံတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းတံတိုင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
“ထိုကာလ၌ ဤသီချင်းကို ယုဒပြည်၌ သီဆိုရလိမ့်မည်။ ခိုင်ခံ့သောမြို့၊ ကယ်တင်ခြင်းရရန် ဘုရားသခင်သည် မြို့ရိုးများနှင့် တပ်တော်များအတွက် ခန့်ထားတော်မူလိမ့်မည်။ သမ္မာတရားကို စောင့်သော ဖြောင့်မတ်သောလူမျိုးသည် ဝင်မည်အကြောင်း တံခါးတို့ကိုဖွင့်ကြလော့။” ~ ဟေရှာယ ၂၆:၁-၂
ကယ်တင်ခြင်းနံရံများအတွင်း၌ ရှိနေသောအခါ ဝိညာဉ်ကို ကာကွယ်ထားသည်။ ကယ်တင်ခြင်း၏တံတိုင်းကို အဘယ်သူမျှမတက်နိုင်၊ တံခါးဝသို့ရောက်ရမည်၊ ယေရှုခရစ်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။
“ငါသည် တံခါးဖြစ်၏။ အကြင်သူသည် ဝင်လျှင် ငါ့အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ ဝင်ထွက်၍ စားကျက်ကို တွေ့လိမ့်မည်။” ~ ယောဟန် ၁၀:၉
ဂိတ်များသည် တရားစီရင်ခြင်း၏သင်္ကေတဖြစ်ပြီး၊ ကောင်းကင်တမန်များသည် အပြစ်နှင့်သူတော်ကောင်းကင်းရှင်းရန် တံခါးများတွင် တရားသူကြီးများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ မင်းမှတ်မိတယ်ဆိုရင်၊ အပြစ်ရှိတဲ့လူကို မဝင်နိုင်အောင် ဧဒင်ဥယျာဉ်တံခါးမှာ ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးထားထားတယ်။
“ထို့ကြောင့် ထိုသူကို နှင်ထုတ်၍၊ ဧဒင်ခေရုဗိမ်ဥယျာဉ်အရှေ့ဘက်၌ အသက်ပင်၏လမ်းကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ အရပ်ရပ်သို့လှည့်၍ မီးတောက်သောဓားကို ထားလေ၏။ ~ ကမ္ဘာဦး ၃:၂၄
မီးတောက်နေသောဓားသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုသည် (ဧဖက် ၆း၁၇ & ဟေဗြဲ ၄း၁၂ ကိုကြည့်ပါ)။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်၊ မြို့တိုင်းရှိ အကြီးအကဲများအား မြို့တွင်းသို့မ၀င်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် တံခါးဝတွင်ထိုင်မည့်သူများကို ခန့်အပ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့် ခိုလှုံရာမြို့များတွင် ဤမြို့၌ ခိုလှုံရန်လူတစ်ဦးသည် ခိုလှုံခွင့်ရှိမရှိကို တရားစီရင်ရန် ဤအကြီးအကဲများသည် ထိုနေရာတွင် ထိုင်နေကြ၏။
“အရှေ့ဘက်၌ တံခါးသုံးပေါက်၊ မြောက်ဘက်တွင် တံခါးသုံးပေါက်၊ တောင်ဘက်တွင် တံခါးသုံးပေါက်၊ အနောက်ဘက်တံခါးသုံးပေါက်။" ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၃
ဤသည်မှာ ယေဇကျေလ၏နောက်ဆုံးအခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဣသရေလလူမျိုးဆယ့်နှစ်နွယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည့် စုစုပေါင်းတံခါး ၁၂ ပေါက်အတွက် မြို့တစ်ဖက်စီရှိ တံခါးသုံးခုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီသည်။
“မြို့တံခါးတို့သည် ဣသရေလအမျိုးအနွယ်၏အမည်ကို လိုက်၍၊ မြောက်ဘက်တံခါးသုံးပေါက်၊ ရုဗင်တံခါး၊ ယုဒတံခါး၊ လေဝိတံခါးတပေါက်၊ အရှေ့ဘက်၌ လေးထောင်ငါးရာ၊ ယောသပ်တံခါး၊ ဗင်္ယာမိန်တံခါး၊ ဒန်တံခါးတစ်ပေါက်၊ တောင်ဘက်၌ လေးထောင့်ငါးရာ၊ တံခါးသုံးပေါက်၊ ရှိမောင်တံခါး၊ ဣသခါတံခါး၊ ဇာဗုလုန်တံခါးတစ်ပေါက်၊ အနောက်ဘက်၌ လေးထောင်ငါးရာ၊ ဂဒ်တံခါး၊ အာရှာတံခါး၊ နဿလိတံခါးတစ်ပေါက်၊ အတိုင်းအတာ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ဝန်းကျင်ရှိ၍ ထိုနေ့မှစ၍ မြို့အမည်ကား၊ ~ ယေဇကျေလ ၄၈:၃၁-၃၅
သို့ရာတွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော ယေရုရှလင်မြို့သစ်၏ ဝိညာဉ်ရေးအမှန်တရားနှင့် ကိုက်ညီသောမြို့အတွက် “သခင်ရှိတော်မူ၏” ဟုအမည်သစ်တစ်ခုရှိသည်ကို သတိပြုပါ။
မှတ်ချက်- ယေဇကျေလသည် ယေရုရှလင်မြို့အပေါ် ပြင်းထန်သောတရားစီရင်ခြင်းနှင့် ထိုအရပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော လျှို့ဝှက်ခြင်းအကြောင်း ဟောပြောသည့်ပရောဖက်ဖြစ်သည်။ ဤတရားစီရင်ချက်ကို ဟောပြောပြီးနောက်၊ “ဣသရေလအမျိုးအား အိမ်တော်ကိုပြရန်” ဗိမာန်တော်ကို ဦးစွာတိုင်းတာရန် ယေဇကျေလအား မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗိမာန်တော်အား တိုင်းတာပြီးနောက် မြို့တော်ကို တိုင်းတာသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဤတူညီသောအမိန့်ကို လိုက်နာသည်-
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၁ တွင် ဗိမာန်တော်နှင့် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူများကိုသာ တိုင်းတာရန် အမိန့်ပေးထားသည်။ ဓမ္မသစ်ဗိမာန်တော်သည် အထူးသဖြင့် သခင်ယေရှုစိုးစံသော နှလုံးသားရှိသူဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ထိုအချိန် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၁ တွင်) သူတို့သည် မြို့တော်ကို တိုင်းတာ၍မရပေ။ သို့သော် ကြောင်သူတော်တစ်ဦးသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင် ယေရှုတစ်ပါးတည်းသာရှိသည့် သန့်ရှင်းသောဧဝံဂေလိတရားသတင်းကို ဘယ်သောအခါမှ တိုင်းတာမည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် ယခု ဤဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 21 တွင်၊ ယေရုရှလင်မြို့သစ်၊ ဝိညာဉ်ရေးအသင်းတော်မှ လျှို့ဝှက်ခြင်းအား လုံး၀ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးမြို့တော်ကိုလည်း တိုင်းတာနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
“မြို့ရိုးသည် အုတ်မြစ်ဆယ်နှစ်လုံးရှိ၍၊ သိုးသငယ်၏တကျိပ်နှစ်ပါးသောတမန် တော်များ၏အမည်များကို ရေးထားသည်။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၄
ယေရှုခရစ်၏ ဧဝံဂေလိတရား၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တမန်တော်များက ဦးစွာချထားခဲ့သည်။ ဤဧဝံဂေလိတရားသည် အသင်းတော်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်နှင့်ပတ်သက်သည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ထိုသခင်အားဖြင့် ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးသည် ဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းအားဖြင့် ခမည်းတော်ထံတော်သို့ ဝင်ခွင့်ရကြသည်။ ယခုမူကား၊ သင်တို့သည် တကျွန်းတနိုင်ငံသားမဟုတ်၊ သန့်ရှင်းသူတို့နှင့်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်၎င်း၊ နှင့် တမန်တော်များနှင့် ပရောဖက်များ၏အုတ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ယေရှုခရစ်သည် ထောင့်စွန်းကျောက်တုံးဖြစ်တော်မူ၏။”—ဧဖက် ၂:၁၈-၂၀
ဘုရားကျောင်းကို တိုင်းတာသည့် ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာ၍ မရပါ။ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကျူပင်ကို ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် တိုင်းတာရမည်ဖြစ်သည်။
“ထို့ပြင် ငါနှင့်စကားပြောသောသူသည် မြို့ကိုတိုင်းတာရန် ရွှေကျူတလုံးရှိ၍၊ မြို့တံခါး၊ မြို့ရိုး၊ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၅
ရွှေကျူပင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော နှုတ်ကပတ်တော်၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီး မီးထဲတွင် စမ်းကြည့်သည်။
“ဆင်းရဲသောသူတို့ကို တရားသဖြင့် စီရင်၍၊ မြေကြီး၏ နှိမ့်ချသောသူတို့အတွက် တရားသဖြင့် တရားသဖြင့် စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ နှုတ်လှံတံ၊နှုတ်တော်ထွက်သက်ဖြင့် လူဆိုးတို့ကို သတ်လိမ့်မည်။” ~ ဟေရှာယ ၁၁:၄
“အဲဒါ ရွှေထက် များစွာသာ၍ အဖိုးတန်သော သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကို စမ်းသပ်ပါ။ မီးဖြင့် စုံစမ်းသော်လည်း ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်သောသူသည် ယေရှုခရစ် ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဂုဏ်အသရေ ထင်ရှားခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။”—၁ ပေတရု ၁:၇။
ယေဇကျေလသည် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကို တိုင်းတာသောအခါ ဤအတိုင်းအတာသည် အတိအကျဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 11 တွင်၊ ဗိမာန်တော်ကို တိုင်းထွာသော်လည်း၊ မြို့ကို လူမျိုးခြားတို့နင်းမိသောကြောင့် မြို့ကို မတိုင်းတာ။
ထို့ကြောင့် ဘုရားကျောင်းသည် အပြစ်တရားနှင့် ကင်းကွာသော သန့်ရှင်းသောမြို့တော်အဖြစ် မှားယွင်းသောဓမ္မသွန်သင်ချက်များကြောင့် အမှန်တကယ် ခြေဖြင့်နင်းမိသည့်အချိန်တစ်ခုရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဤဗျာဒိတ် ၂၁ တွင်၊ တစ်မြို့လုံးကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် တိုင်းတာနိုင်ပြန်သည်။
ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့ကိုချီ၍ အတွင်းတန်တိုင်းထဲသို့ ဆောင်သွား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် အိမ်တော်၌ ပြည့်လေ၏။ ငါ့အား အိမ်မှပြောသည်ကို ငါကြား၏။ ယောက်ျားက ငါ့နားမှာ ရပ်နေတယ်။ တဖန်တုံ၊ အချင်းလူသား၊ ငါ့ပလ္လင်တော်၊ ငါ့ခြေဘဝါး အရပ်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ အလယ်၌ အစဉ်အမြဲ ငါကျိန်းဝပ်၍၊ ငါ၏နာမတော်သည် သန့်ရှင်းသော အမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဣသ ရေလအမျိုးသည် မြင့်သောအရပ်၌ ရှင်ဘုရင်၏ အသေကောင်ကို ညစ်ညူးစေ၍၊ ငါ၏ တံခါးခုံဖြင့် တံတိုင်းကို၎င်း၊ ငါ့တိုင်ဖြင့်၎င်း တံတိုင်းကို၎င်း၊ ငါနှင့်၎င်းတို့ စပ်ကြားတံတိုင်းကို၎င်း ပြစ်မှားမိသော စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအမှုအားဖြင့် ငါ၏သန့်ရှင်းသောနာမကိုပင် ညစ်ညူးစေကြပြီ။ ယခုတွင်၊ သူတို့သည် မတရားသောမေထုန်ကို၎င်း၊ ရှင်ဘုရင်တို့၏ အသေကောင်များကို၎င်း ငါနှင့်ဝေးစေ၍၊ သူတို့အလယ်၌ အစဉ်အမြဲနေစေမည်။ အချင်းလူသား၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် မိ မိ ၏ ဒု စ ရိုက် အ ရှက် ကွဲ စေ ခြင်း ငှါ အိမ် ကို ပြ ကြ လော့။. ပြုမိသမျှတို့ကြောင့် ရှက်လျှင် အိမ်၏ပုံစံ၊ အသွင်အပြင်၊ အပြင်သွားပုံ၊ အဝင်အထွက်၊ ပုံစံအားလုံး၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အားလုံးကို ပြပါလေ။ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသမျှနှင့် ပညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကို စောင့်ရှောက်၍ စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်အလုံးစုံတို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ၊ ဤသည်မှာ အိမ်တော်၏တရားဖြစ်သည်။ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ပတ်လည်ဝိုင်းထားတဲ့ ဘောင်တစ်ခုလုံးဟာ အသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်။ ဤသည်မှာ အိမ်တော်၏တရားဖြစ်သည်။” ~ ယေဇကျေလ ၄၃:၅-၁၂
ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုကိုယ်စားပြုသော ဝိညာဉ်ရေးမြို့တော်တစ်ခုလုံးသည် “အသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်ရန်” ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြို့တွင်းရှိသူများသည် ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် ဖြစ်သင့်သည် ဟုသာ ဆိုလိုပါသည်။
“မြို့သည် စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်၍ အလျားသည် အနံကဲ့သို့ ဖြစ်၍ မြို့ကို ကျူလုံးနှင့် တိုင်း၍ အလျား တသောင်းနှစ်ထောင်၊ အလျား၊ အနံ၊ အမြင့် သည် ညီ၏" ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၆
အရွယ်အစား အတိုင်းအတာများသည် ကြီးမားသည်။ ၃၂ မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိသောမြို့။ ယေရုရှလင်မြို့သည် ထိုပမာဏနှင့်ပင် မနီးစပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဤအတိုင်းအတာများသည် ဝိညာဉ်ရေးအရဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ရေးနိုင်ငံတော်ရှိ ပြင်းအားကိုကိုယ်စားပြုသည်— ပကတိနိုင်ငံတော်မဟုတ်ပေ။
"ယောက်ျားတစ်ယောက်၏အတိုင်းအတာ" ကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည် အချက်နှစ်ချက်ကို အလေးပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်-
“ကောင်းကင်တမန်” သည် လူသားဆန်သောတမန်ဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိတရား၏ ကြိမ်လုံးဖြင့် တိုင်းတာသော တရားဟောဆရာ။
ဤ၀ိညာဉ်ရေးမြို့တော်သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လူသားများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကတွင် တည်ရှိသည်- ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ၏ နှလုံးသားထဲတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေကြီးရှိ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
“ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကြွလာသောအခါ၊ ဖာရိရှဲတို့ထံ တောင်းလျှောက်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မျက်မှောက်ပြုလျက် မရောက်၊ ဤအရပ်၌ ကြွလာသည်ဟု မဆိုရကြ။ ဒါမှမဟုတ် ဟိုမှာ ရှုလော့၊ ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​နိုင်​ငံ​တော်​သည် သင့်​အ​ထဲ​၌​ရှိ​၏။” ~ လုကာ ၁၇:၂၀-၂၁
“မြို့ရိုးကို မြတ်စွာဘုရားနှင့် တည်ဆောက်၍ မြို့သည် ကြည်လင်သော ဖန်သားကဲ့သို့ ရွှေစင်ဖြစ်၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၈
Jasper နှင့် အခြားအဖိုးတန်ကျောက်များသည် ဘုရားသခင်ထံတော်နှင့် ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရွှေစင်သည် သန့်ရှင်းသော ယုံကြည်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
“မြို့​ရိုး​အုတ်​မြစ်​ကို အဖိုး​တန်​ကျောက်​မြတ်​မျိုးစုံ​နဲ့ အလှဆင်​ထား​တယ်။ ပထမအုတ်မြစ်သည် jasper; ဒုတိယ၊ နီလာ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ၊ မြ၊ ပဉ္စမ, sardonyx; ဆဋ္ဌမ၊ သတ္တမ၊ chrysolyte; အဋ္ဌမ၊ နဝမ၊ ဥဿဖရား၊ ဒသမ၊ ဆယ်ခုမြောက်၊ ဒွါဒသမ၊ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၁၉-၂၀
ဤကျောက်တုံး ၁၂ လုံးသည် အစ္စရေးလူမျိုး ၁၂ နွယ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဓမ္မဟောင်း ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် ကျောက် ၁၂ လုံးကို ဝတ်ဆင်သောအခါ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်လည်း ဤသည်မှာ မှန်ပါသည်။
ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော အမှုဖြင့် တရားစီရင်ခြင်း ရင်ဖုံးကို လုပ်ရမည်။ သင်တိုင်းကိုလုပ်ပြီးမှ၊ ရွှေ၊ အပြာ၊ ခရမ်းရောင်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့် လုပ်ရမည်။ Foursquare နှစ်ဆဖြစ်ရမည်။ တထွာသည် အလျားဖြစ်၍၊ တထွာသည် အနံဖြစ်ရမည်။ ထိုကျောက်စာတန်း၌ ကျောက်လေးတန်းကို ထားရမည်။ ပထမတန်းသည် သာဒိ၊ ဥဿဖရား၊ ကာဘွယ်၊ ပဌမတန်းဖြစ်ရမည်။ ဒုတိယတန်းသည် မြ၊ နီလာ၊ စိန်ဖြစ်ရမည်။ တတိယတန်းတွင် လီဂရီ၊ ကျောက်တုံးကျောက်ရုပ်၊ စတုတ္ထတန်း၌ ဗေရလ၊ တံဆိပ် ရေးထွင်းသကဲ့သို့၊ တကျိပ်နှစ်ပါးသော အမျိုးအလိုက်၊ ~ ထွက်မြောက်ရာ ၂၈:၁၅-၂၁
သို့သော် အမှန်တွင်၊ ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်၌ပင် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ကျောက်တုံးများဖြင့် ချထားသည်ဟု ဆိုထားသည်။
"အို မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော၊ သက်သာရာမရ၊ ရှုလော့၊ သင်၏ကျောက်များကို နီလာရောင်ဖြင့် ငါချထားပြီး သင်၏အုတ်မြစ်ကို နီလာဖြင့် ချပေးမည်။ သင်၏ ပြတင်းပေါက်များ၊ ကာဘွယ်တံခါးများ၊ သင်၏နယ်နိမိတ်အားလုံးကို သာယာသောကျောက်များဖြင့် ငါလုပ်မည်။ သင်၏သားသမီးအပေါင်းတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ဆုံးမဩဝါဒကို ခံရကြလိမ့်မည်။ သင်၏သားသမီးတို့၏ ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ကြီးမြတ်လိမ့်မည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌ တည်လိမ့်မည်။ ညှဉ်းဆဲခြင်းမှ ဝေးလိမ့်မည်။ မကြောက်နှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သင့်အနီးသို့ မရောက်ရ။" ~ ဟေရှာယ ၅၄:၁၁-၁၄
“တံခါးတစ်ဆယ့်နှစ်ပေါက်သည် ပုလဲတစ်ဆယ့်နှစ်ပွင့်ဖြစ်၏။ ပုလဲတစ်လုံးမြို့၏လမ်းသည် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖန်သားကဲ့သို့ ရွှေစင်ဖြစ်၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၂၁
တံခါးတိုင်းသည် “ပုလဲတစ်လုံး” ဖြစ်သောကြောင့် ယေရှုသည် အသင်းတော်၏တံခါးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သမျှအားလုံးကို ရောင်းချရန် ညွှန်ကြားထားသည့် “အဖိုးတန်သောပုလဲတစ်လုံး” ဖြစ်တော်မူ၏။ လူတို့သည် ထိုသို့ပြုသောအခါ၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ဝတ်ပြုရန် ဘုရားကျောင်းထဲသို့ ဝင်ကြသည်။ စိတ်တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဝန်ဆောင်မှုမရှိပါ။
“တစ်ဖန် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းမွန်သောပုလဲများကိုရှာသော ကုန်သည်နှင့်တူသည်၊ အကြင်သူသည် အဖိုးတန်သောပုလဲတစ်လုံးကိုတွေ့သောအခါ၊ သူ၌ရှိသမျှကို သွား၍ရောင်း၍ ဝယ်လေ၏။” ~ မဿဲ ၁၃:၄၅-၄၆
“ထိုအရပ်၌ ဗိမာန်တော်ကို ငါမတွေ့ခဲ့။ အကြောင်းမူကား၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားနှင့် သိုးသငယ်သည် ထိုဗိမာန်တော်ဖြစ်တော်မူ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၂၂
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ယေရုရှလင်မှာ ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗိမာန်တော်ကို သခင်ဘုရားက ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး၊ အဲဒါကို ဘယ်တော့မှ ထာ၀ရတည်ဆောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ယေရှုယူဆောင်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်သည် ဝိညာဉ်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗိမာန်တော်အသစ်လည်းဖြစ်သည်။ လူအပေါင်းတို့အလယ်၌ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တော်မူ၏။ နာမတော်အားဖြင့် နှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက် တွေ့ဆုံသည့်နေရာတိုင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့ကြားတွင် ရှိနေသည်။
"ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ နှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက်စုဝေးရာအရပ်၌ ငါသည်ထိုသူတို့အလယ်၌ရှိ၏။" ~ မဿဲ ၁၈:၂၀
“ထိုမြို့၌ နေ၊ လ၊ အလင်းကို အလိုမရှိ၊ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် ထိုမြို့ကို လင်းစေ၍၊ သိုးသငယ်သည် ထိုအလင်းဖြစ်တော်မူ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၂၃
အံ့ဩစရာမှာ၊ ဤရူပါရုံ၏ပရောဖက်ပြုချက်ကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းမရေးမီ အနှစ် ၈၀၀ ကျော်ကပင် ပေးခဲ့သည်!
“သင်၏ပြည်၌ အကြမ်းဖက်မှု၊ သင်၏နယ်နိမိတ်အတွင်း ပျက်စီးခြင်း၊ သင်၏မြို့ရိုးကို ကယ်တင်ခြင်းဟူ၍၎င်း၊ သင်၏တံခါးတို့ကို ချီးမွမ်းခြင်းဟူ၍၎င်း၊ နေ့အချိန်၌ နေသည် သင်၏အလင်းမဖြစ်ရ။ အလင်းကြောင့်လည်း လသည် သင့်အား အလင်းမပေးရ။ ထာဝရဘုရားမူကား၊ ထာဝရအလင်း၊ သင်၏ဘုရားသခင် သင်၏ဘုန်းအသရေသည် သင့်အတွက် ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်။ သင်၏နေမဝင်ရ။ သင်၏လသည်လည်း မဆုတ်ခွာရ။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်၏အလင်းဖြစ်တော်မူ၍၊ သင်၏လူအပေါင်းတို့သည်လည်း ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်။ ငါ၏ဘုန်းထင်ရှားစေခြင်းငှာ ငါစိုက်ပျိုးသောအကိုင်းအခက်၊ ငါ၏လက်ဖြင့်လုပ်သော ပြည်ကို အစဉ်အမြဲ အမွေခံရကြလိမ့်မည်။ သူငယ်သည် လူတထောင်၊ ငယ်သောသူသည် အားကြီးသော လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ~ ဟေရှာယ ၆၀:၁၈-၂၂
“ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော လူမျိုးတို့သည် ထိုအလင်း၌ ကျင်လည်ရကြလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိ ရှင်ဘုရင်တို့သည် မိမိတို့၏ဘုန်းအသရေကို ထိုမြို့ထဲသို့ သွင်းကြလိမ့်မည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၂၄
ဤနေရာ၌ ဟောပြောသော ဘုရင်များသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အစတွင် ဟောကြားခဲ့သော ဝိညာဉ်ရေး သူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် အပြစ်ကို အုပ်စိုးပြီး သခင်ဘုရားအပေါ် သစ္စာစောင့်သိသော တန်ခိုးရှိသူများဖြစ်သည်။ ဘုရင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ဘုရင်များသည် ကမ္ဘာ၏ရှုထောင့်မှမဟုတ်ဘဲ၊
“သစ္စာရှိသောသက်သေဖြစ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်၏အထံတော်မှ၊ သေလွန်သောသူတို့၏အဦးဘွားသောသား၊ မြေကြီး၏ရှင်ဘုရင်တို့၏ မင်းဖြစ်တော်မူ၏။ အသွေးတော်အားဖြင့် ငါတို့ကိုချစ်၍ ငါတို့ဒုစရိုက်များကို ဆေးကြောတော်မူ၍၊ ငါတို့ကို ဘုရားသခင်နှင့် ခမည်းတော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ ခန့်ထားတော်မူ၏။ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်ရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။” ~ ဗျာဒိတ် ၁:၅-၆
“ထိုမြို့၏တံခါးတို့ကို နေ့အချိန်၌ လုံးဝမပိတ်ရ။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၂၅
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၊ စစ်မှန်သောအသင်းတော်ပင်လျှင် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ဝိညာဉ်ရေးရာနေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်တရား၏ဝိညာဉ်ရေးအမှောင်သည် ထိုနေရာတွင် ဘယ်တော့မှမဝင်ပါ။ သခင်ယေရှုခရစ်၏ တစ်ခုတည်းသောအလင်း- ကမ္ဘာ၏ ထာဝရအလင်း။
“ထို့​အ​ခါ​ငါ​တို့​သည်​သူ​၏​အ​ကြောင်း​ကို​ကြား​ရ​ပြီး​လျှင်​ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​အလင်း​ဖြစ်​တော်​မူ​ပြီး​သူ​၌​အ​မှောင်​အ​လုံး​အ​မျှ​မ​ရှိ​ကြောင်း​ကို​သင်​တို့​အား​ဖော်​ပြ​ပါ​သည်။ ငါတို့သည် သူနှင့် မိဿဟာယဖွဲ့၍ မှောင်မိုက်၌ ကျင်လည်သည်ဟု ဆိုလျှင်၊ ငါတို့သည် မုသာဝါဒကို မကျင့်၊ အလင်း၌ ကျင်လည်လျှင်၊ သားတော်ယေရှုခရစ်သည် ငါတို့ကို အပြစ်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေတော်မူ၏။” ~ ၁ ယော ၁:၅-၇
“တပါးအမျိုးသားတို့၏ ဘုန်းအသရေကို ထိုပြည်ထဲသို့ သွင်းကြလိမ့်မည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၂၆
လူမျိုးတို့၏ ဘုန်းအသရေသည် သိုးသငယ်၏အသွေးအားဖြင့် အပြစ်ခပ်သိမ်းမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်သည်။ တဖန်၊ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ထံ ဘုရင်နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသူများ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁:၅-၆ ကိုကြည့်ပါ)။
“စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအမှု၊ မုသာစကားကို မဆိုဘဲ၊ သိုးသငယ်၏အသက်စာစောင်၌ ရေးထားလျက်ရှိသော သူတို့ကို ညစ်ညူးစေသောအရာ၊ ပညာရှိထဲသို့ မ၀င်ရ။ ~ ဗျာဒိတ် ၂၁:၂၇
သင့်စိတ်နှလုံးနှင့် အသက်တာတွင် အပြစ်ရှိနေပါက သင်သည် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန် မတောင်းဆိုနိုင်ပါ။ အမှန်မှာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ဤအဖြစ်မှန်ကို သင့်အားဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအဖြစ်မှန်ကို နားလည်ရန် သင်သည် အထက်အရပ်မှ မွေးဖွားလာသူဖြစ်ရမည်။
သင်သည် ဤဝိညာဉ်ရေးမြို့တော်၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာသိပါသလား။ မဟုတ်ပါက၊ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား သေချာပေါက် ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သူ့ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ အမှုဆောင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချပါ။ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ဖို့ ဘုရားသခင်ကို အားကိုးပါ။ အမျိုးသားများ ချုပ်ကိုင်ထားသော အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းများတွင် သင်၏ယုံကြည်မှုကို မထားပါနှင့်။
မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအပြည့်အစုံတွင် အခန်းနှစ်ဆယ့်တစ်ခန်းသည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ လျှို့ဝှက်လှည့်စားမှုများကို ယခင်က ဖျက်ဆီးပြီးနောက်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 21 သည် စစ်မှန်သောအသင်းတော်ဖြစ်သော ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအစစ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ မြင့်မားသောအဆင့်အမြင်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်၊ သင်သည် ““လမ်းပြမြေပုံဗျာ”
အမျိုးအစားများ ခရစ်တော်၏သတို့သမီး, ကောင်းကင်ယေရုရှလင်, ဗျာ ၂း၂၁, ဘုရား၏ဗိမာန်တော် တဂ် နတ်သမီးလေး, ကောင်းကင်ဘုံ, သန့်ရှင်းသော, ဗိမာန်တော် ပို့စ်ညွှန်း
ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးသတ် – လာမယ့် အောက်တိုဘာလ 21 ရက် 2011 ခုနှစ်။